Burkina Faso : Fahatsiarovana ny faha-10 taona namonoana an’i Norbert Zongo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2018 14:34 GMT
Folo taona lasa izay tamin’ny faha 13 ny volana Desambra 1998, no hita tao anaty fiara iray main’ny afo teo amin’ny lalan’i Sapouy, eo ho eo amin’ny 100 km miala ny renivohitra ny vata mangatsiakan’ilay mpanao gazety Norbert Zongo sy ireo olona telo niaraka taminy izay rotidrotiky ny bala. Lehiben’ny famoaham-baovao mivoaka isan-kerinandro L'Indépendant i Norbert Zongo sady iray amin’ireo mpanao gazety malaza indrindra ao Burkina Faso ary novonoina nandritra izy nanao fanadihadiana momba ny vaovao niseho tamin’izany fotoana izany : ny vonoan’olona tao amin’ny lapam-panjakana sy ny mety ho mahasaringotra ny rahalahin’ny Filoha tamin’izany.
Nanoratra tao amin’ny bilaogin’ny Commitee to Protect Journalists ( Komity miaro ny mpanao gazety) i Mohammed Keita :
Na dia tonga aza ny fahafolo taona namonoana an’i Zongo izay tsy nisy tohiny kanefa dia mbola miriaria any ireo izay namono azy ( Nolavin’ny mpitsara ny fanamelohana ireo dimy voarohirohy tamin’ny taona 2006) dia nanararaotra izany ny vady navelan’i Norbert Zongo sy ireo mpiara-miasa taminy ary ireo mpikatroky ny zon’olombelona mba hitakiana ny rariny. Nosokafana ny tranonkala iray antsoina hoe Norbert Zongo: 10 ans d'impunité mba hankalazana ny fahatsiarovana an’i Norbert Zongo ary nisy fanangonan-tsonia mba hanerena ny manampahefana Burkinabe hanokatra indray ny raharaha :
Nanentana ireo mpamaky ny lahatsorany amin’ireo bilaogera Burkinabe maro, anisan’izany i Ramata, mba hanasonia ny fanangona-tsonia ny hanokafana indray ny fanadihadiana.
Tao anatin’ireo hira fahatsiarovana maro sy vao haingana ho fanomezam-boninahitra an’i Norbert Zongo, nisafidy hira iray avy amin’ny mpihira reggae Ivoariana Tiken Jale Fakoly i Augustin Scalbert tao amin’ny fanadihadiana an-gazety momba ity fahatsiarovana ity tao amin’ny tranonkalam-baovao Rue 89, izay nihevitra an’i Zongo ho iray amin’ireo ‘’maritiora’’ ao amin’ny kaotinanta. Hoy ny tononkira hoe :
Namoaka famintinana ny fanadihadiana momba ny famonoana an’i Norbert Zongo izay tsy nisy tohiny tamin’ny volana Jolay 2006 ihany koa ny bilaogy natokana ho an’ity faha folotaona ity. Nanontany tena ihany koa ny L’Observateur Paalga ny amin’ny tohin’ireo olona dimy voarohirohy tamin’ity vonoan’olona ity. Nanoratra i Boureima Diallo, tao amin’ny lahatsoratra iray hafa tao amin’ny L’Observateur Paalga hoe :
Nanamafy ny fahanginana ofisialy izay manjaka manodidina ity raharaha ity i Mohammed Keita tao amin’ny bilaogy Comittee to Protect Journalists :
Tamin’ ny herintaona (2007), nanontany ny bilaogy Africa-Flak, nandritra ny tsingerintaona faha-sivy nahatsiarovana ity vonoan’olona ity hoe:
Nanazava ny fikirizany i Nabi Youssfou :